samedi, 14 novembre 2020 09:26
Kitra-Fifanintsanana CAN : Higadona anio ny Barea ary hiazo an’i Toamasina avy hatrany
Ho tonga eny amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny tolakandron’ny sabotsy 14 novambra ny Barea an’i Madagasikara, taorian’ny lalao mandroso nihaonany tamin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire ny alakamisy 12 novambra. Tsy hiala ao amin’ny faritry ny seranana ireo mpilalao, fa vao migadona dia handray fiaramanidina manokana hitondra azy ireo avy hatrany hiazo an’i Toamasina, hanomana ny fiatrehana ny lalao miverina amin’i Côte d’Ivoire ny talata 17 novambra ho avy izao, ao amin’ny Stadium Barikadimy. Niondrika an’isa 2 noho 1 ny Barea tamin’iny lalao mandroso iny, izay tafiditra amin’ny fifanintsanana isam-bondrona hiadiana tapakila ho amin’ny CAN hatao any Cameroun.
jeudi, 12 novembre 2020 09:36
Kitra-Fifanintsanana CAN 2021 : Anio ny lalao mandroso hihaonan’i Madagasikara sy Côte d’Ivoire
Hotanterahina anio 12 novambra ao amin’ny Kianja Alassane Ouatara, Abidjan, ny lalao mandroso ifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Tafiditra amin’ny fifanintsanana isam-bondrona hahazoana ny tapakila ho amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, na CAN 2021, hatao any Cameroun ity lalao anio ity. Vonona ary tony dia tony ny Barea hiatrika ny lalao. Mitarika vonjimaika ny Barea, ao amin'ny Vondrona K, misy an'i Madagasikara, Etiopia, Côte d'voire ary Niger. Handeha mivantana amin’ny Televiziona Malagasy ny lalao anio. Amn'ny 7ora hariva, ora aty Madagasikara, no hanomboka ny lalao.
Hotontosaina ao amin’ny Kianja Alassane Ouatara ao Abidjan ny alakamisy 12 novambra 2020 ny lalao mandroso hifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire. Amn'ny 7ora hariva, ora aty Madagasikara, no hanomboka ny lalao, izay tafiditra amin’ny fifanintsanana hahazoana ny tapakila hahatogavana amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, na CAN 2021, izay hotanterahina any Cameroun. Nilaza i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasy na Barea fa “misy ny fahabangana goavana eo amin'ny mpilalao (Covid-19), mety ihany koa eo amin'ny fahazoan-dalana”. Na izany aza hoy izy dia mikaro-bahaolana amin'ny fiatrehanay ity lalao ity ny fitondram-panjakana. Tonga omaly ao Abidjan ny delgasiona tarihiny. Nanomana fandraisana sy fitsenana manokana ny delegasiona malagasy ireo Malagasy manorim-ponenana any Côte d'Ivoire.Ny Staff sy ny ankabeazan'ireo mpilalao kosa dia anio hariva no tonga ao Abidjan. Manomboka rahampitso sy ny alarobia ny fanazarantenan’ny Barea ao amin'ny Kianja Alassane Ouatara.
Nanapa-kevitra ny CAF fa hatao "à huit clos" ary tsy hasiana mpijery ny lalao rehetra mahakasika ny fifanintsanana CAN Total Cameroun 2021 hatao noho ny toe-javatra ara-pahasalamana mitranga ankehitriny vokatry ny Covid-19 sy mba hampirindra tsara ny lafiny ara-piarovana. Ho an’ny Barea sy ny Elefanta, dia hatao any Abidjan Côte d’Ivoire ny 12 novambra ny lalao mandroso, ary ao Toamasina ny lalao miverina eto Madagasikara ny 17 novambra. Hanomboka amin’ny 9 novambra izao ny fampivondronana ireo mpilalao ho an’ny ekipam-pirenena malagasy.